iPad Pro က သင့်အတွက်နောက်ထပ် Computer ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောလိုက်ပြန်တဲ့ Apple
iPad Pro က သင့်အတွက်နောက်ထပ် Computer ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောလိုက်ပြန်တဲ့ Apple
20 Nov 2018 . 10:14 AM
iPad Pro တွေက Apple ရဲ့ အကောင်းဆုံး iPad တွေအနေနနဲ့ ၂၀၁၅ ကတည်းက ရှိနေခဲ့တာပါ။ iPad Pro တွေကို ထုတ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ Pro ဆိုတဲ့အတိုင်း Pro User တွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီးထုတ်ပေးထားတာဖြစ်လို့ Smart Keyboard နဲ့ Apple Pencil လို Accessory တွေကိုပါ Apple က ဖန်တီးပေးထားတာပါ။
ဒါပေမယ့် Apple က iPad Pro နဲ့ What’sacomputer? ဆိုတဲ့ Video တစ်ခုကို YouTube မှာတင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ Video ကတော့ Computer ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို Apple က ပြန်ပြီး အစချီချင်တဲ့သဘောမှာရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ယူဆထားတဲ့ Computer ဆိုတာ Keyboard တစ်ခု ၊ Mouse ဒါမှမဟုတ် Trackpad ပါပြီး File တွေ၊ Pro Software တွေသုံးနိုင်တဲ့ Computer တွေကိုပဲ Computer လို့ စိတ်ထဲမှာ တွေးမ်ိကြပါတယ်။
ဒီ Video ကတော့ iPad Pro က Laptop တွေထက်မြန်တာကိုပဲပြောထားတာပါ။ Laptop တွေကိုတော့ အစားထိုးဖို့မဟုတ်သေးတာ သတိထားမိနိုင်ပါတယ်။
Apple က အဲ့ဒီအတွေးကို iPad Pro နဲ့ဖျောက်ပစ်စေချင်ပုံရပါတယ်။ Computer ဆိုတာ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့လာတတ်ပြီး Interface အမျိုးအမျိုး၊ OS အမျိုးအမျိုးနဲ့လာတတ်တယ်ဆိုတာကို iPad Pro နဲ့ ချပြလိုက်တာပါပဲ။ ဒီ YouTube Video မတိုင်ခင် လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ကတည်းက iPad Pro တွေအတွက် ဒီ Campaign ကိုစလုပ်လာတာ အခုထိပါပဲ။ Computer ဆိုတာ ဘာလဲလို့ ကိုယ်တိုင်ပြန်မေးရတော့မလိုဖြစ်နေပါပြီ။
iPad Pro က သငျ့အတှကျနောကျထပျ Computer ဖွဈနိုငျတယျလို့ပွောလိုကျပွနျတဲ့ Apple
iPad Pro တှကေ Apple ရဲ့ အကောငျးဆုံး iPad တှအေနနေနဲ့ ၂၀၁၅ ကတညျးက ရှိနခေဲ့တာပါ။ iPad Pro တှကေို ထုတျရတဲ့ရညျရှယျခကျြကတော့ Pro ဆိုတဲ့အတိုငျး Pro User တှအေတှကျ ရညျရှယျပွီးထုတျပေးထားတာဖွဈလို့ Smart Keyboard နဲ့ Apple Pencil လို Accessory တှကေိုပါ Apple က ဖနျတီးပေးထားတာပါ။
ဒါပမေယျ့ Apple က iPad Pro နဲ့ What’sacomputer? ဆိုတဲ့ Video တဈခုကို YouTube မှာတငျခဲ့ပါတယျ။ အဲ့ဒီ Video ကတော့ Computer ဆိုတဲ့ အဓိပ်ပာယျကို Apple က ပွနျပွီး အစခြီခငျြတဲ့သဘောမှာရှိပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ယူဆထားတဲ့ Computer ဆိုတာ Keyboard တဈခု ၊ Mouse ဒါမှမဟုတျ Trackpad ပါပွီး File တှေ၊ Pro Software တှသေုံးနိုငျတဲ့ Computer တှကေိုပဲ Computer လို့ စိတျထဲမှာ တှေးမိကွပါတယျ။
ဒီ Video ကတော့ iPad Pro က Laptop တှထေကျမွနျတာကိုပဲပွောထားတာပါ။ Laptop တှကေိုတော့ အစားထိုးဖို့မဟုတျသေးတာ သတိထားမိနိုငျပါတယျ။
Apple က အဲ့ဒီအတှေးကို iPad Pro နဲ့ဖြောကျပဈစခေငျြပုံရပါတယျ။ Computer ဆိုတာ ပုံစံအမြိုးမြိုးနဲ့လာတတျပွီး Interface အမြိုးအမြိုး၊ OS အမြိုးအမြိုးနဲ့လာတတျတယျဆိုတာကို iPad Pro နဲ့ ခပြွလိုကျတာပါပဲ။ ဒီ YouTube Video မတိုငျခငျ လှနျခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ကတညျးက iPad Pro တှအေတှကျ ဒီ Campaign ကိုစလုပျလာတာ အခုထိပါပဲ။ Computer ဆိုတာ ဘာလဲလို့ ကိုယျတိုငျပွနျမေးရတော့မလိုဖွဈနပေါပွီ။